The kumashure kumunhu zvomudzimu tsvakurudzo | Apg29
In yangu kunyora izvi zvinotarisirwa rouprofita, ndakaisa mufananidzo waJesu pamusoro "akarasika / återvunne mwanakomana" (Ruka 15) sezvo yokufananidzira background, imwe afterimage zviitiko rapfuura remakore-kare.
Asi iwe unogona kuvatarira akapoteredza uye kutaura kuti neniwo kunokuita mufananidzo inobva nguva apo Jesu akapa sechinhu muenzaniso nokuda ipapo dzaitevera zviitiko. Tinofanira chete kuyeuka kuti vose mienzaniso kukwana. Havana chinhu, uye vanogona kutungamirira zvakawanda makwara kupfuura nguva zvaireva. Zvino mubvunzo shoko Bhaibheri / yaMwari, magwaro aya ouprofita akatakura nekubuda, kumusoro uye pasi, pamusoro uye kure mabhuku 66. Naizvozvo, kuverenga Bhaibheri kuzodza Mutsvene ndiyo zvikuru nzira kusvika pa kunzwisisa magwaro, sezvo Mweya anopa upenyu kuna tsamba uye mutauro pazvinhu. (2 VaK 3: 6)
In chinyorwa yangu I abata Fall rakashandurwa nevatumwa mu "förhimmelska" uye ayo nerechiHebheru muBindu reEdeni vanhu. Asi uyewo kusimbisa ruponeso kuvanhu kubudikidza naJesu, kukanganwirwa kwezvivi, kunyanya kununurwa somunhu kudzoka "musha" kuna Mwari. Chapter reruremekedzo Ruka 15: 11Zvino ndima mberi, zvichienderana shanduro kupiwa zvakawanda pamusoro emakore. Mufananidzo anogona kunzi: "anopambadza", asi uyewo "anopambadza". Chitsauko nekupesana, 1, 2, 3, nezvimwewo, pashure kwete kusvikira 1228 munguva yedu - kuburikidza Chirungu yezvechitendero Stephen Lang kuti auspices. The yemubhaibheri mabhuku ekare, kana metered zvitsauko vane misoro uye ndima kupesana.
IBhaibheri chikonzero hwakarongwa pakunamata / rechitendero Anoda pakati pavanhu. Pakutanga, murume (1 Genesis 1-2) zvechokwadi kutsvaka huMwari, sezvo vanhu vaviri vokutanga, Adhamu naEvha vakararama asina mhosva uye pachena ukama naMwari Musiki wavo ari panyama reIdheni matsvene - munhu akasiyana chikamu umambo hwaMwari asi pamwe chinokosha nokubwinya yokudenga. Adhamu naEvha vaigona uye haana kudya miti yose yomunda, kusanganisira "muti woupenyu", asi muti wokuziva "zvakanaka nezvakaipa", Mwari akanga arambidzwa kuti vadye uye havana kunyange ikabatwa. Kana vakadya muti kuti vaizofa yezvokunamata uye venyama njere; "Rufu kufa" (1 Gen. 2:16); kufa "rufu rwechipiri" (21: 8).
It kutsvaka kwete ipapo uye pakunamata / zvechitendero kubva chero nhungamiro, kana kubva Adhamu naEvha divi kuna Mwari kana kubva kudivi raMwari kwavari, iyo isingataurwi chichidiwa kuti vakanga vari mumunda. Kutotenda wakanga akafanana kuvimba noMusiki wake nokutarisirwa uye pedyo navo. Kumunhu pakutaura, zvikuru yakafanana nzira sezvo vari ukama hwemhuri hwakanaka. Munoziva muri kupi. Kufunga kuti yokufananidzira zvinangwa sei "vakarasika / anopambadza" akanga asati akabva pamusha. Ikoko, muna pamba, akanga ose kuchengeteka vakanga vakadzikama inopisa baba ruwadzano, zvokudya zvakanaka, nehembe, yakawanda rusununguko uye mhepo yakachena. Zvisinei, pfuma nhaka kuti aise achimirira kuti auye sokuti makatanga kukwezva naye. Vakatosvika "wakarambidzwa" mari, waiva muedzo simba. Kufara, zvichida godo rake mukoma, Aida abvisa kune zvachose rusununguko kuwana "nyika" panze, uye kuti vabudirire "kubudirira" kupfuura kumba papurazi. Pamwe, iye kuzvitutumadza uye vanozvikudza kure zvakadaro chinangwa. Kuwa izvo zvinogona kunzi naye, ari kuti iye ndiye "Pachine" vakadanwa ayo chikamu vagari "mwanakomana nhaka" wababa - avo kurega mwanakomana muduku asingatengi achamira: "Baba, ndipei mugove wenhumbi wakanangana neni. Zvino akakamura pfuma yake pakati pavo. Nguva pfupi pashure mwanakomana muduku yakazara zvose ake uye vakaenda kure kune imwe nyika. " ndipei mugove wenhumbi wakanangana neni. Zvino akakamura pfuma yake pakati pavo. Nguva pfupi pashure mwanakomana muduku yakazara zvose ake uye vakaenda kure kune imwe nyika. " ndipei mugove wenhumbi wakanangana neni. Zvino akakamura pfuma yake pakati pavo. Nguva pfupi pashure mwanakomana muduku yakazara zvose ake uye vakaenda kure kune imwe nyika. "
Dzokera weEdheni uye kuwa ikoko (Numeri 3 1). Kana vanhu vaviri vakawira mashoko Muedzi wacho, akatora muchero womuti wakarambidzwa uye akadya, kuti "kuva saMwari, muchiziva chakanaka kubva chakaipa," akanga aitira nomunhu inokosha mhosva Mwari yokutanga. Izvo kwaireva kuti, kushandisa mufananidzo womumwe murume sezvisingakundiki pakakoromoka kana rusvingo kwegore risingapindiki akasimuka pakati naye uye Mwari. Vanhu vakarasika nokuda zvisingagamuchirwi maitiro; ari maturo danho, rinobvumirana zvose ukama hwayo naMwari - uye akasvika kudivi ndege yake naye semunhu munguva uye simba naye. A "pamuviri", mumwe "kurambana" ne - sezvarakanga rakaita - zvisingafanoonekwi zvakaipa nokuda rwevanhu.
Pakakoromoka sei Adhamu naEvha vose mweya, pfungwa uye muviri. Zvose zvakanga mupfungwa zvokufa zvikanganiswe, ruzha uye ndonda. Shoko rechiHebheru Chat (runoenzanirana shoko muchiGiriki hamartia), chivi chiri Swedish, akarova zvizere simba chaimo vanhu. tsika Vose (kubva muchiGiriki greek ethos, yokungotaura kufungisisa.) uye morale (pamusoro Lat Moral, sapamazuva chiito.) - (nezvetsika anganzi tsika womukati kambasi) - akagamuchira "kukuvadza", tsika dzakaipa, kupindwa muropa, kushungurudzwa, kuti vasingagoni zvirape pachavo. Marwadzo, pfeka uye ruvengo kuti muzvinhu zvakawanda kuva mugove womunhu. The tsvina yakaitwa zvisikwa zvose uye hombodo uye zvakanga zvakaoma "mamota" uye "maronda". Mhepo parinozunguzwa nenhema, kunyengera, zvakaipa, mhosva, kufunganya, wacho, kushushikana, nemishonga, kure, kusurukirwa, nedhimoni uye kutapwa. Chinonyanya kukosha kwaiva uranda "uori"
Nguva yokufananidzira - nekuti kugadzirwa - zvichienzaniswa "vakarasika / anopambadza" kunaka ruzivo uye zvisarudzo varombo "nyika". Upenyu hutsva zvirokwazvo atanga pamusoro - chinogona sokuti: tarenda, kunonakidza, akanaka uye vanozvikudza nzira. Asi zvakanga pachena, uye haana kugara kwenguva refu, "Ikoko, iye upenyu hwounzenza uye akapambadza zvose zvaakanga anazvo." On zvinotevera "nzara", pamwe evanhu chokudzingwa, izvo vakamumanikidza kuti atore basa dzenguruve varidzi. Nguruve aifanira kurinda uye kurarama pakati, anogona kunyange kufananidzira madhimoni basa. Tinoverenga Somuenzaniso, Marko 5: 12-13 sei mweya yakaipa aida kupinda muboka renguruve pedyo apo Jesu angada kuvadzinga mumunhu zvavainazvo. A chido Jesu, asi kutenderwa, kufanana mweya zvaiva nguruve. Ndivo Chokwadi dzakawanda nzvimbo muBhaibheri inoratidza nguruve uye nguruve maitiro, kutsanangura tsvina iri mumudzimu. Munhuwi sokuti kure kure.
Kana vanhu vaviri vakawira kuti muedzo "neNyoka", vakauya uye isu sapamarudzi mushure akasungwa, vatakuri uye akasangana muedzo kutsvaka. Somuenzaniso, kuzvikudza, godo, kumeso, nhema, chena, nhema, kuvava, dzokunyengera, defamation, hedonism, unzenza, abnormality, simba, udzvanyiriri, zvakaipa uye zvemidzimu. Izvi Vaisanganisa aine kutsvaka kurasikirwa Mwari uye vakarasika muParadhiso. The ukama aiva "pasina tariro uye musina Mwari munyika." (VaEfeso 2:12) Bhaibheri rinoratidza nzvimbo dzakawanda pamusoro mabasa anoitwa nevanhu nokuda Fall, uye mazwi yakawanda unhu halyard zvichizoita kushanda. Muna VaGaratiya 5: 19-21, kwakanyorwa inodhindwa pazvinhu muchimiro: "Mabasa enyama ndiwo aya: upombwe, tsvina, nemitambo kunamata zvidhori, zvemidzimu, kuvengana, kupopotedzana, godo, kufufutirwa nehasha, själiskhet, kunogadzirisa makakatanwa, dzidziso dzakatsauka, utsinye, kudhakwa, mitambo yemafaro akanyanyisa, uye vakadaro. Ndinokuudzai pachine chii ndamboreva: avo vanoita zvakadai havangadyi nhaka yeushe hwaMwari. "
VaRoma 1: 29-32 Kuzvinyora: "Ivo vakava vakazadzwa nekusarururama kose, nokuipa, makaro, uye ruvengo, vazere negodo, umhondi, gakava, kunyengera uye nokuvenga. The makuhwa uye kuchera, vanovenga Mwari uye chisimba. The declaims uye vhaira, vane tsanzira mune zvakaipa uye vasingateereri vabereki, mapenzi, rusingatendi, rudo uye dzoutsinye. Vanonyatsoziva kuti mutemo wakarurama waMwari kuti avo vanoita zvakadai vakafanirwa norufu. Asi vanoita kudaro, uye naivowo vanobvuma kuti vamwe vanozviita "Saka zviya uye tariro zvakaipa zvakanga, uye saka zvakaipa zviri, pana Adhamu naEvha kuwa panyasha muBindu reEdeni -. Pamuedzo kumedura sezvo vakanga nenyoka. How kure yacho, ndichiri kuda kuita kuwedzera, kutenda kwechiKristu zvebhaibheri, pane nzvimbo yevanhu zvinokanganiswa vatendi, mupfungwa yokuti wedu Mukuru, Jesu,
Ndiani nyoka kuti akanyengerwa Adhamu naEvha muParadhiso aiva? - Zvakanaka, zvino isu kudzokera zviitiko zviri mberi "wachi nguva" kuti akatora nzvimbo imwe yepanchi munzvimbo dzomumatenga. In Isaya 14 uye Ezekieri 28, akaita chimwe akawa pa-inotekeshera uye ngirozi vanopenya chivi uye ichamumukira Mwari. Inoti, pakati pezvimwe zvinhu kuverenga kuti makandira ake uye nyere vaishongedzwa "nendarama". Asi iye haana kugutsikana nechinzvimbo chake sezvo mukuru "mudziviriri" chokudenga, asi vanoda megalomaniac yakakwirira mudenga simba - kusvikira anogara samambo pamusoro "gudaförsamlingens gomo". Chii kuwa kubva nyasha zvingaitika muBhaibheri yokudenga rinotipa hapana mhinduro. Asi kwaiva svibisa matsvene yokudenga bhora - sei wokumwe uye asinganzwisisiki zvingaita sezvinoshamisa - kuti aifanira kudzorerwa kubudikidza kurapwa raJesu kudurura-na ropa rechibayiro,
Nengirozi nyika yakanga kukwezverwa ari kukwanisa kusarudza pakati pake naMwari. Zvino zvinoita sokuti chetatu hondo dzokudenga akasarudza kumira vadzivisi vaMwari (Zvak 12: 4). Tisati egofulle kerubhi mhosva Mwari, paisava makwikwi kana matanda maviri kutora chisarudzo mukutenda. Faith haako sezvo kutanga. Baba, Mwanakomana uye vatumwa vaiva pamwe muutsvene nokukudzwa pasina basa rinokosha pane mumwe pakati pavo. Pakanga pasina kana kuzorwa naMwari nzvimbo dzokugara. Kwete, kudenga akaenda asina riine chii anganzi pakunamata kana chitendero. No wacho nokuti, kana pashure mumwe kana mumwe kusvika musi.
Asi kuti anodada mhosva Lucifer. Saka, muenzaniso waJehovha Fall mubindu reEdheni "akasika" akaedza Adhamu naEvha - nokudaro chivi mufananidzo. Chinhu vamire panze Adhamu naEvha mupfungwa dzavo kuti tsvina, uye kuti rudzi rwevanhu akasvika maitiro akasiyana yechivi pashure - zvakanga pakutanga vose zvipenga engirozi muchinda Lucifer. Mubindu saizvozvowo kopi chinhu kuti zvakaitika kare, yakafanana negirazi mufananidzo. Uyezve, Jesu akaratidza sezvinotevera ari muvengi John 10:10 waMwari: "Mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza." Nhasi ari pamuviri, bonde kuchinja uye euthanasia rakanga kuti dzevanhu zviito kwakaitwa nesayenzi yezvokurapa uye Humanism zita, mukuedza itibatsire kukura zvokuti interacts pamwe basa nezita "shanduka '. The / kuti vaenzi hwakasimba Unobata.
Uye izvi zvichida inobatana naJesu akataura Johani 8:44 pamusoro Fien-mberi: "Akanga ari muurayi kubva pakutanga uye haana akamira pamusoro chokwadi Si-da, nokuti hakuna chokwadi maari. Paanotaura nhema, anotaura panze amene, nokuti ndiye murevi wenhema uye baba vadzo. "Muna 1 Johane 3: 8 inoti:" Dhiyabhorosi ave achitadza kubvira pakutanga. " Muverengi hakufaniri kushandisa ndima dzeBhaibheri dzakasiyana kuwana sei zvakava "Mutakuri wechiedza," kerubhi chakajeka pakati zvose ngirozi venyama munyika yokudenga, aigona zadzwai chivi pfungwa nezviito - semuenzaniso zvakadai sokuponda uye nhema. Unogona kufunga ichi uye kuchengeta hurukuro mashoko uye kunyora nezvazvo. Asi kwete zvokufungidzira zvokuti zvoupengo kuti inotungamirira nezvinotaurwa neBhaibheri runyararo panhau.
Zvinokonzera divi nyoka, iye Vakaidza Adhamu naEvha kuti chivi - vose vave kutsiva nokuda Lucifer vake kunyimwa kubwinya kwake simba uMwari, uye hasha kuti akanga akandwa kunze uye pasi kubva kudenga nokuda yokupanduka kwavo. Izvo zvaireva kuti zviri pachena akavhiyiwa Kushandurwa / nokutuka kuti "nyoka". Asi funga izvi muzita dzakawanda nemavambo uye yokuti Bhaibheri rinotaura nezvake se: shato, Satani Dhiyabhorosi, Bherizebhubhu, Revhiatani, muvengi, muvengi, anokumhan'arira, mhumhi uye mutorwa. mazita matsva sezvaari munyika dzakasiyana-siyana zvemashiripiti-vezvitendero zvikuru uye Mungano munhau. Somuenzaniso: Marduk, Zeusi, Samhain, Ahriman, The nguruve, Kunyadziswa, dhiabhorosi uye dhiabhori.
Tichifunga nyoka akavenga zvose Mwari akasika uye akaita. Sezvingatarisirwa ngirozi muchinda Michael. Michael akatungamirira ejecting naye kudenga: "Zvino kwakava nehondo kudenga; Mikaeri navatumwa vake vakarwa nezibukanana. Uye dhiragoni vakarwa nengirozi dzake, asi akanga asina simba zvakakwana, uye pakanga asisiri chero nzvimbo kudenga "(Zvakazarurwa 12: 7-8). The nyoka vakavenga munda uye vanhu vaviri, Chokwadi. Asi zvikuru kunyanya, wakadzingwa godo Mwanakomana, uye aita iye hatiske muvengi wake uye muvengi. Zvichida inofunga pano nechekare kuti pachava misangano itsva Mwanakomana waMwari pakupedzisira, zvakawanda kukundwa mu zvakawanda tvekamper. Tiri akagara anzwe maitikiro azvakaita kusanganisira yake kurasikirwa kana akazvipa kuti aedze Jesu murenje. Zvakazarurwa 13: 8 anotipa Jesu (eg Hedegårds shanduro): "Gwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika." Pano tine zvimwe chete kunyora raZvakazarurwa, asi pamwe mukare maonero pakati: Kudivi rimwe saka: The Dhiyabhorosi rave "muurayi" kubvira pakutanga, mutadzi "kubva pakutanga". Ukuwo, kana mwanakomana waMwari wakaurawa "kubvira pakuvambwa kwenyika."
Zvakare, isu tichati zvidzore pamwe kududzirwa izvi magwaro, kana kufungisisa pamusoro chero divi kana nguva, iyo inoshanda okuti "pakutanga", "kubvira pakutanga", "kubvira pakuvambwa kwenyika." Nokudaro vanogona kuva nezvenguva apo kusikwa naMwari panyika ichigere kutongovapo, kana ane chokuita nemamiriro acho ezvinhu ari pasi uye zvinhu zvakasikwa Paradhiso. Kuti tinogona kuva akanaka chokwadi ndechokuti "uraya" kana chiporofita, ipapo asingaoneki zvakazadziswa, asi pamusoro pamuchinjiko weKarivari zvinooneka kuzadziswa. Zvakadaro muna 1 Gen 3:15 Mwari anoisa yeNyoka kutarisana kukasaitwa chokwadi: ". Iye (mwanakomana wangu) achakupwanya musoro wako uye iwe uchaipwanya chitsitsinho chake" Muna Zvakazarurwa 12:12 panoti: saka "Fara, haiwa iwe denga imi vanogara maari! Asi nhamo panyika uye mugungwa, nokuti dhiabhorosi aburuka kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti nguva yake ipfupi. "Martin Luther akaimba uye muchinangwa 1529 kekutanga yaro vemungano rwiyo wechokwadi," A Fort Samasimba Ndiye Mwari Wedu "(No. 237 ari Swedish hymnal):" Muchinda Rima pairi kutyisidzira uye kutsamwa ari kugadzirira förvisst nechisimba uye argan inodonha ... "zvinoita sokuti anenge akaita mwanakomana waMwari wake mutsvene basa, kuti kurwa zvokunamata pamwe rawa ngirozi huru kudenga, uye pamigumisiro yechivi ramangwana revanhu, vaizova kutevera panogasa achinyora - akanga aibvuma asingaoneki uye youprofita "vakaurayiwa"; Mwanakomana, Gwayana atova nenguva Lucifer hondo Nokurasikirwa mudenga. ari kugadzirira förvisst nechisimba uye argan ubvise ... "Zvinoita sokuti kuda kufanana mwanakomana waMwari wake mutsvene basa, kuti kurwa zvokunamata pamwe rawa ngirozi huru kudenga, uye pamigumisiro yechivi ramangwana revanhu, vaizova mutevere pekufa yekubva - kare aita pachake asingaoneki uye ouprofita "akauraya"; Mwanakomana, Gwayana atova nenguva Lucifer hondo Nokurasikirwa mudenga. ari kugadzirira förvisst nechisimba uye argan ubvise ... "Zvinoita sokuti kuda kufanana mwanakomana waMwari wake mutsvene basa, kuti kurwa zvokunamata pamwe rawa ngirozi huru kudenga, uye pamigumisiro yechivi ramangwana revanhu, vaizova mutevere pekufa yekubva - kare aita pachake asingaoneki uye ouprofita "akauraya"; Mwanakomana, Gwayana atova nenguva Lucifer hondo Nokurasikirwa mudenga.
Lucifer ari kuwana uye sarudza se "yokudenga" Ormväsendet, zvina anomukweretesa uye nedkastanden kana bortgåenden - pamwe rakawedzera kukundwa mumwe "danho":
1. Budai kudenga chengirozi "Lucifer": "Dhiragoni huru, kuti nyoka yekare, inonzi Dhiyabhorosi uye Satani, uye kuti anonyengera yose, yakakandirwa panyika, nevatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete naye." ( 12: 9)
2. Sezvo nyoka kubva yepasi paradhiso (chikamu chinooneka hwaMwari, asi nokubwinya yokudenga) - Zvimwe apo Adhamu naEvha vakanga vasingagoni nawo. 3. Kubva nezvenzvimbo Muchuchisi / Satani Mwari (imwe nzvimbo kumatunhu yokudenga) munhu waMwari, Jobho (2: 7): "Uye muchuchisi / Satani akafamba kubva Ishe, uye akarova Jobho namaronda akaipa, kubva petsoka kusvikira korona yake." kupomerwa iyi aiva Up 12:10 chenhando: "mupomeri wehama dzedu wakandirwa pasi, iyo masikati nousiku mhosva pamberi paMwari wedu." Saka, "Simoni, Simoni! Satani akabvunza (ndawana kana, zvimwe mhiri.) Kuti akuzungurei segorosi "(Ruka 22:31)" Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, anofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka anogona upedze ".. (1 Petro 5: 8) "Satani amene unozvishandura kuva mutumwa wechiedza." (2 VaKorinde 11:14) 4. kugehena (Zvakazarurwa 20:10)
Cherechedza kuti Jesu zvinobatanidzwa muzvikamu zvina, zvachose zvakapesana, nekumuka kubva kuvakafa, ane kukura kukunda nokubwinya nerimwe chechetere:
1. Up kubva muguva (Hadhesi) mushure muMweya akanga aparidza kukunda kwake paKarivhari apo (1 Petro 3:19). 2. kuvakafa, uye kubva muguva: "Naizvozvo mwoyo wangu unofara uye rurimi rwangu unofara, hongu, kunyange muviri wangu ichazorora mutariro kuti hamuzosiyi ini muguva kana kutendera Mutsvene wenyu kuti aone kuora." (Mab 2:27). 3. Up kuna Baba mbiri munhu asati asvika kwaari, "Jesu akati kwaari (Mariya Magadharini): 'Rör asina kubata ini, nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi enda kuhama dzangu undovaudza kuti, ndikakwira kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu, uye wenyu Gud. ' "). (Johani 20:17), pakutanga manheru iwoyo unoratidza akakudza Jesu vadzidzi yakazarirwa pachavo nokuda kwokutya vaJudha (20:19). Ikoko, unovazivisa vaviri vavo maoko sårmärkta netsoka, uye dzake akabayiwa divi. Pano pakanga pasina mubvunzo kuti varege kubata naye. Uye mazuva masere gare gare, Jesu akakoka mudzidzi Tomasi kuti aise munwe wake mumaoko ake uye murutivi rwake (20:27). 4. akwira chaBaba: ". Akavafambisa (vadzidzi) kubva kuBhetani, ndokusimudza maoko ake akavaropafadza" (Ruka 24:50) "Sezvo Jesu ataura kwavari, akagamuchirwa kumusoro kudenga, uye . akagara kuruoko rworudyi rwaMwari "(Mk.16: 19)
Ndakanzwa uye ndikaona
With ayo akakurumbira zvoudyire uye zvakaipa miitiro sokuti pakarepo nyoka "pachivande" mubindu reEdheni. Uye cherechedzai kuti Adhamu naEvha vakanga vari kunzwa uye akaona nyoka. Chaizvoizvo vose akataura uye yakanga akarurama chinzvimbo. The mutauro wakashandiswa muParadhiso, isu hatizivi Bhaibheri. It angave "mutauro paradhiso" chaiyo kufa zvishoma nezvishoma. Mumwe pakati mutauro zvichida, sezvinoita rinoti muna 1 VaKorinde 13: 1: ". Kana ini nditaure nedzavatumwa" Asi kwakaitawo akaratidza nepfungwa kuti kwaiva mhando mutauro mugadzi unotevera rechiHebheru mutauro kuti vanhu vechiJudha vaipomerwa, izvo zvinogona kuva zvechokwadi (kana kuzoripira naMwari) nomwanakomana waNoa Shemu (Semites), mwanakomana wake naEbheri (VaHebheru ), ipapo yeChitanhatu pfungwa Kwapera Abhurahama, mwanakomana wake Isaka, mwanakomana wake Jakobho (Israeri),
Muchirevo chechinyorwa chino Zvinoshamisawo kuchengeta kuti pashure peMafashamo omuzuva raNoa zvose wakataura panyika mumwe mutauro chete (1 Genesi 11). Apo Mwari akavhiringidza mitauro nokuda vanhu kuvaka Shongwe yeBhabheri, saka kuti hapana ainzwisisa mumwe, yaiva nzvimbo nokuda chidzoke mutauro wechiHebheru. Mumwe akafunga mukana maererano inception echiHebheru, haana kupiwa zita Ebheri (VaH. Ibrim) kuita pasina nzvimbo Hebhuroni (VaH. Ivrit) kuti Abrama akasvika munyika yeKenani. Mukati Orthodox chiJudha Hebrew muchikwata sohutsvene. Kunyange vaKristu kuvhangera vanoda rudo kuna echiHebheru iyoyo.
Rave ventilated neshure mukati chiKristu nezvaSatani kunzwisisa kana tiri Mutsvene, kutaura nendimi (muchiGiriki. Glossolalia). Mubvunzo haagoni kuwana mhinduro yakajeka. The Bible rinotsanangura Ichokwadi kuti "isu kutaura zvakavanzika," kutaura nendimi iri zvichishandurwa neMweya Mutsvene waMwari. Sezvazvakanyorwa rinoti 1 VaKorinde 14: 2: "Uyo anotaura nendimi haatauri kuvanhu asi kuna Mwari. Hapana anomunzwa kana mweya wake anotaura zvakavanzika "Uyezve, VaRoma 8: 26-27". Saka Mweya Mutsvene anotibatsira mukusava nesimba kwedu. Nokuti hatizivi zvatinofanira kunyengeterera, asi Mweya amene anotinyengeterera pamwe anotura mafemo pasina mashoko, uye iye anonzvera mwoyo yedu anoziva kufunga kwaMweya, nokuti Mweya anonyengeterera vatsvene, Mwari achida. "
Asi tisingadi kutaura kure kuti pane anogona kuva ndimi venhema. Inogona, uye kazhinji akangofanana, kuti zvivi vechiKristu kubvumira udyire kudzora matauriro nendimi. Asi pachena kunogona masimba emadhimoni kutora pamusoro nendimi, kana kune wokudzokera shure pamwe nonchalance, pamwe hanya uye kutamba somugumisiro. Occultist anotaura "nendimi" zvakasikwa zvitendero, Satanists kuita, itsva-zera vanhu kuzviita. Chokwadi, kunyange zvitendero zvikuru chiTao, chiBuddha uye chiHindu, ipapo. Izvi zvinoitika pasi nemadhimoni. Zvinonzi zvimwe kuzviwanira chose kubva mumhepo, zvinogona ndikaenda wakafanana Bhaari-vaprofita paGomo reKameri varwise muprofita waMwari Eriya: "Zvino yakanga masikati, vabatwa neshoko nehasha Ouprofita uye akabata (zvemashiripiti, akacherechedza yangu.) kusvikira nguva chezviyo "(1 Madzimambo 18.:
Nhambo zvakaipa akazviratidza mubindu reEdheni panguva muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, akanga asina chete nyoka mune zvokunamata chaicho chimiro, nyoka, asi akatora uye vaishandisa nyoka mumuviri mhuka umambo. Lucifer, Satani, dhiabhorosi, dragoni, nengwena, akazviratidza achinyepera nyoka asi kuwedzera: aiva akarurama mamiriro. Chinhu zvichida zvakaita kuti zvive nyore kuti Adhamu naEvha kuti kuedzwa. Ipapo Mwari anogona kubata nyoka, kuti kudya uye achinyepera kuva nyoka, verenga rugwaro 1 Genesisi 3:14: "Zvino Jehovha Mwari kuti serpent'Eftersom waita izvi, iwe unenge ngavatukwe kupfuura zvipfuwo zvose, uye nezvikara mhuka. Nedumbu wako iwe enda, uye pasi uchifanira kudya chero iwe mhikuriso. ' "Kufanana ndima" reverb "zvichida, Mambo Cobra vanogona kukura matanhatu metres refu uye musimuke kuti chetatu kureba kwayo. Snake n'anga ndehwokuti nyoka vachamuka. Kumabvazuva kunamata chiripo inoshamisa jooga ruzivo - Kundaliniormen. A nyoka zvokunamata kunoreva ihopslingrad pasi pamukova horo yacho munhu. Patinofungisisa, nyoka anogona kuitwa kuti vatasve payo, uye vanotanga kuenda kumusoro ari Kufungisisa uye kutevera nenzira nomuzongoza kuburikidza pakunamata gwara gadziriro, inonzi meridians. Popular asi ngozi kufungisisa, ndinoparidza.
Zvakanga zvakaoma nyore vanhu vaviri kuti vasaratidza muedzi, ipapo snakelike ataura. Kana paiva chokukura mhuka uye vanhu kuburikidza mutauro kutaura mumwe muParadhiso, tinogona kubva kutaurwa kana Bhaibheri kwete zvimwe kurahwa. Sezvinobvumwa akataura dhongi gare gare mubhaibheri nyaya muprofita Bharami, waipfuura mugwagwa yokusavimbika Israeri (4 Exodus 22). Asi ndima 28 inoti: "Ipapo Jehovha akashamisa muromo wedhongi gadzi, uye iye akati kuna Balaam'Vad ndakaitei kwamuri, nekuti iwe katatu akapfumbira ini?" Bharamu akapindura mbongoro, 'Unofanira akaita benzi neni! mbongoro yako kana ndaiva nomunondo muruoko rwangu, ndingadai ndakuuraya ikozvino kuchera. 'The mbongoro akati kuna Bharamu,' Ko ini, iwe nomunhu zvose upenyu hwako nhasi? Uye handina nokusingaperi kushandiswa kuita kuti iwe "Akapindura kuti: '. Nej'"?
Sei nomutauro kugona norugare ramangwana oumambo waIsraeri, vari ukama pakati vanhu nemhuka, tinowana pasina yakajeka mapepa. Asi maererano naIsaya 11: 8, zvinotevera isu anenge hakungagoni ukama kuva chokwadi: ". An mucheche kuchaita kutamba panguva mumakomba wenyoka, mwana akarumurwa kunanavira kuchetura ziso wenyoka" Humwe usiku mumusha muUganda muna 1992, ini ndava kamuri nenamo rima wakanzwika manzwi rinotsamwa uye mhando nyika kunze pasuo rangu. Sezvo pasina nguva vadzikama, ndakasarudza kuedza uye kudzokera hope. Mangwanani, ndakadzidza kuti usiku varindi vachishandisa matochi avo vakanga vawana kuti ine uturu chaizvo nyoka yakanga kupinda mukamuri rangu nepakanga pakazaruka pazasi pamukova sill. Ndine nyoka uri mufananidzo navakaurawa.
Zvakanaka, avo kutsvaka basa kune nyoka somunhu muupenyu hwavo - uye chokwadi chivi, pakarepo anowana Adhamu naEvha kuti vari "kupfeka". Chinhu chinokosha kunaka kwakaitika zvese, kuti mweya yavo, pfungwa uye muviri. Kunyange apo vari munyama kugadzirira zvepabonde, izvo zvingareva Mashoko rwevanhu. Asi nyama dzapedyo ngapaonekwe ichi kuti kunge ozodzivirirwa mhando utsvene uye kubwinya kwaMwari, sezvo muenzaniso tinoverenga muna 1 Genesisi 2:25: "Vose murume nomukadzi vakanga vasina kusimira, asi havana kunyara pamberi imwe." Adhamu naEvha nguva kuhwanda Mwari mubindu reEdheni, isati anogona kunzi kuti pakunamata / dzechitendero kutsvaka unomuka. Uye ndiMwari inotanga: "Asi Ishe Mwari akadana munhu, akati kwaari:. '? Hadde Uri'"
Kunyange zvazvo Adhamu naEvha akasvika pamberi paMwari, saka akataura chete nokuvigwa nyadzi nekuti kuva kupfeka - uye mhosva kuwa pamusoro mumwe uye wakati wanyengerwa nenyoka pazviri. Mwari akavapa dzamatehwe kuitira kuti avanze panyama yavo yakashama, aireva kwete kuti pakarepo vakasiya chero "kuzvidzivirira" nokuda kwavo kusapfeka zvokunamata. Asi chokwadi ndechokuti nokuwa kwakaguma nudity katatu. Vose vakava "kupfeka", nokusunungura, akasungwa, isina uye oga. Kutevedzana rinoguma Mwari "ndokuendesa" Adhamu naEvha muEdheni uye akaisa änglakeruber "kumabvazuva" kurindira nzira yomuti woupenyu. Zvimwe kudzivisa uye adzivirire ikozvino kutadza asingatani vanhu kupinda uye angadaro muti woupenyu, mudye zvibereko zvayo uye kurarama nokusingaperi - asi zvitadzo unforgiven. Zvino akaisa pakunamata / dzechitendero tsvakurudzo yakatanga zvizere zvikuru. Nokuti vanhu vokutanga kwaiva kuedza kuwana nzira yavo kudzokera Mwari kuti vakanga varasikirwa Community yavo. Uye nokutungamirira kwaMwari kwaisava pamusoro. Kwete, zvino akatanga Nziyo mabasa makuru. saka Chikamu yeBhaibheri verenga: "Jehovha ari kudenga pamusoro pavanakomana vavanhu, kuti aone kana aripo kunzwisisa, chero vanotsvaka Mwari." (Pisarema 14: 2)
Panguva iyoyo kuti Adhamu naEvha kungasiya Paradise, mhepo kana anotanga uyewo nyoka panze. Akapinda asi crawled kunze. Asi izvozvo hazvirevi kuti akabva anyangarika pakusikwa Mwari kana vanhu. Zvichida akava zvakaipa reptilian (pamusoro Lat. REPTILIS, "zvinokambaira") akadzingwa Paradise zvishoma pamberi kwevanhu vaviri, uye akanga akavamirira kunze kuipa kwavo uye nemiedzo mitsva. Pauro anonyora nyevero vaKorinde (2 11: 3): ". Asi ndinotya kuti senyoka nemanomano ake Evha, saka vanofanira ndangariro dzenyu dzingasvibiswa dzitsauke kutsauka maikorosikopu wechokwadi uye pakuzvipira kuna Kristu"
Panguva ino mune zvokunamata kutsvaka huru unomuka nokuti vanhu. Kupanga "akarasika paradhiso" nokuti zvizere kukumbana pamwe Mwari zvakare, uye zvinokonzerwa kwenguva refu naMwari muvanhu, rakawanikwa ramangwana Somuenzaniso, Ecclesiastes nemashoko (3:11): "Uyewo isingagumi, wakavachengeta mumwoyo yevanhu. Asi havagoni kunzwisisa basa raMwari, kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira. "
Mari zvitendero, kana pasina yakananga zvemashiripiti okunze, akamirira Adhamu naEvha pavakanga vachibuda Paradise mafuro. "Dzidziso dzemadhimoni" (1 Tim 4: 1), kukanganisa siyana, kuti akauya kure "pachiteshi" mabvazuva kubva kumira katsi nembwa. mwanakomana wavo wokutanga, Kaini dzechitendero kutsvaka, vakanga vachiramba Mwari, kukanganiswa sezvo akanga nenyoka iye akaita kuti akanyengedza kuzobayira Mwari yakakanganiswa uye egotrippat nzira. Kana munun'una wake Abheri akapa chipo chacho kuna Mwari, sezvaiitwa kutotenda Mwari, uye chaiitirwa mune wechokwadi uye anozvininipisa nzira. Zvakaguma Mwari akagamuchira chibayiro chaAbheri asi kwete aKaini, izvo zvakatoita kuna Kaini yake zvakaipa kuchinjwa akauraya munin'ina wake. Muna 1 Johane 3:12 ndiye chiitiko ichi kumusoro sezvo imwe muenzaniso, kuti haisi kuita saKaini, "waiva mwana wowakaipa uye akaponda munun'una wake. Uye nei Kaini akamuuraya? zvakanaka,
Sezvo mufananidzo vakarasika / anopambadza vakatakura sezvo pabango Illustration - mumwe pakubika - kuti kuwa mubindu reEdheni uye corollary kuti, zvinogona kunzi mwanakomana akanga kupinza "upenyu ndararama uye akapambadza pfuma yake." Pairi vakatevera kuti iye, vauya nzara huru panyika, akazvipa uye sinker somuranda kune nguruve varidzi ikoko, kuti dzinenge kuwana chinhu chokudya, asi kunyange nguruve zvokudya, akanga achitora. muridzi penguruve, ndiye vo mutyairi muranda, ndechokuti mufananidzo pfungwa akafanana Bherizebhubhu, "muchinda wemadhimoni (nguruve, akacherechedza yangu.)" (Mateo 12:24).
SEARCH ruponeso rwaShe
In yemweya uyu zvakare, isu sevanhu vanhu nhasi. Dai isu ari musarudzo pakati villoläriga uye chokwadi, pakati pezvakanaka nezvakaipa, pakati chivi uye nokururama - nokusanangura zvakanaka, kusarudza zvakarurama, sarudza zvino. Musatarira kusatendera, evolutionism, Humanism uye zvemidzimu. Asi tsvakai chete Ishe, Musiki uye Muponesi wechokwadi uye rudo "chiso": ". Vaya vanonditsvaka ndivo vanondiwana" (Zvirevo 8:17) "Vaya vanotsvaka Jehovha vanonzwisisa zvose." (Zvirevo 28: 5) "Search . tanga hwake umambo nokururama kwake "(Mateu 6:33)" vateresi nevatadzi akaita kwavo nzira Jesu "(Ruka 15.1)" Ndinzverei, unokwanisa kurarama "(Amosi 5: 4)".. Jehovha akanaka kune mweya vanomutsvaka "" anopa mubayiro vaya vanomutsvaka. ". (VaHebheru 11: 6)
I Pedzisai Pakusarudza maererano neBhaibheri, kuti apo chivi kunowanda, apo aibuda Mwari frälsningsnåd zvakatowanda. Fall uye nemigumisiro yayo Vanotyisa zvikuru. Asi kuregererwa anoshanda kuburikidza Mwanakomana, Ishe Jesu, zvinoshamisa uye kunyange zvakawanda kudzika nepurani dzavo uye chinangwa. Nyaya yaiva huru, asi kudzorerwa kukuru, zvikuru ndiye. "The chokwadi (Jesu) ichakusunungurai." (Johane 8:32) "Kana Mwanakomana achikusunungurai, iwe zvechokwadi vakasununguka." (Johani 8:36) "In Naye tine ruregerero (kubva zvakaipa) uye ane kukanganwirwa zvivi zvedu. "(VaKorose 1:14) Jesu akava" kururama kwedu "(1 VaK 1:30) pamberi paMwari.
kukanganwirwa naMwari uye naye kuyananiswa murume atendeuka, kunoitika zvakananga panguva munamato muzita raJesu pamusoro payo: Titambire mune mamwe mashoko! Power chevhangeri, ipapo kuita stepwise, muitiro-zvakadai, kusvikira wenguva kudzorerwa kubva murima, maronda, pamusoro maoko, vajairira - chii chivi akaroora uye depredations aita. Peter akaparidza Mabasa 2:40 nemashoko okuti: "Regai zvikununure ichi kudziviswa (rwakatsauka / zvakaipa) chizvarwa." Kuparidza kwaPauro Mabasa 17:30 kuti yava nguva kupfidza pakunamata / vechitendero "kusaziva". Tora sezvo mufananidzo "akarasika / mupambadzi" dzokera kuna Baba: "Iye akasimuka akamira ndokufamba (kutsvaka musha) kuna baba vake." (Hatidi kuziva zvaiitika kana mwanakomana wake wakasvika muuranda nguruve muridzi. ) baba zvinozoita akanga atova kunze uye akatarisa mwanakomana wake, uyo murayiro ose hatizivi. Asi iye anogona pakupedzisira ona "kutendeuka" mwanakomana wake kure, kwaakanga nguruve hwema, shabby uye nokuderera kuuya vachidzungaira munzira kumba: "Achiri kure, baba vake vakamuona uye vakamunzwira tsitsi pamusoro pake. The baba akamhanya kundosangana naye, akawira pamutsipa wake, akamutsvoda. "
Two magwaro pamusoro dot anorova pano chaipo, kune rumwe rutivi, Jakobho 3: 8: "Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi." Uye Ukuwo, Zvakazarurwa 3:20: "Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu uye akazarura musuo, ndichapinda maari uye adye naye, uye iye neni. "Mwanakomana, zvivi," Ndatadza, "uye zvinodiwa usina nyasha," Ini handichafaniri kunzi akadana mwanakomana wako ", kunotungamirira matanho anoverengeka pakuitika hemkomstens:" Asi baba vakati kuvaranda vavo: Terera vabudise yakanakisisa jasi akaiisa pamusoro pake uye muise mhete paruoko rwake, nemanyatera patsoka dzake! Uye vawane mhuru igoriuraya, Ngatidyei tipembere. Nokuti mwanakomana wangu uyu akanga afa, zvino wararamazve; wakange arashika, wawanikwa. Uye bato akatanga. "Kubva rima nyoka chiedza musoro kuda haazopwanyiwi zvachose (Rome 16:20). Satani achakurumidza näpsas nokusingaperi. uipi Spiritual pakupedzisira nguva dzose kuva unarmed. Nokuti vatumwa yevatadzi hapana ruponeso. Satani ake vateveri vari zvishoma nezvishoma kuenda kugehena. Asi munhu ane kutenda, kutenda nenzira kare kuti vakadzokera Mwari, uye anogona kutaura saPauro muna 2 Timoti 1: 2: "Ndinoziva wandakatenda." Uye VaRoma 8:16: "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) Satani achakurumidza näpsas nokusingaperi. uipi Spiritual pakupedzisira nguva dzose kuva unarmed. Nokuti vatumwa yevatadzi hapana ruponeso. Satani ake vateveri vari zvishoma nezvishoma kuenda kugehena. Asi munhu ane kutenda, kutenda nenzira kare kuti vakadzokera Mwari, uye anogona kutaura saPauro muna 2 Timoti 1: 2: "Ndinoziva wandakatenda." Uye VaRoma 8:16: "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) Satani achakurumidza näpsas nokusingaperi. uipi Spiritual pakupedzisira nguva dzose kuva unarmed. Nokuti vatumwa yevatadzi hapana ruponeso. Satani ake vateveri vari zvishoma nezvishoma kuenda kugehena. Asi munhu ane kutenda, kutenda nenzira kare kuti vakadzokera Mwari, uye anogona kutaura saPauro muna 2 Timoti 1: 2: "Ndinoziva wandakatenda." Uye VaRoma 8:16: "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) Satani ake vateveri vari zvishoma nezvishoma kuenda kugehena. Asi munhu ane kutenda, kutenda nenzira kare kuti vakadzokera Mwari, uye anogona kutaura saPauro muna 2 Timoti 1: 2: "Ndinoziva wandakatenda." Uye VaRoma 8:16: "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) Satani ake vateveri vari zvishoma nezvishoma kuenda kugehena. Asi munhu ane kutenda, kutenda nenzira kare kuti vakadzokera Mwari, uye anogona kutaura saPauro muna 2 Timoti 1: 2: "Ndinoziva wandakatenda." Uye VaRoma 8:16: "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9) "Mweya unopupurirana nomudzimu wedu kuti isu tiri vana vaMwari." Tiri "boka mutambo, ungano dangwe vane mazita avo akanyorwa kudenga" (VaHebheru 12:23). "Asi imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, pachangu vanhu vapupure mabasa ake mbiri kwaiye wakakudanai kubva parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa." (1 Petro 2: 9)